मंसिर २ गते मंगलबार कुन राशि भएकाहरुले के गर्ने, के नगर्ने ? - Cherwant Khabar
मिति: २०७७ मंसिर १४, आईतवार
कक्षा १२ को परिक्षा आज देखि शुरु चार लाख भन्दा बढीको सहभागीता
मंसिर ९ गते मंगलवार हेर्नूहोस आजको राशिफल
निजगढ विमानस्थलः गुरुयोजना बनाउने कम्पनी छनोट
मंसिर ८ गते सोमबार कुन राशिका लागि कति शुभ ?
बंगलादेशभन्दा पहिले चीनबाट मल नेपाल आइपुग्ने
मंसिर २ गते मंगलबार कुन राशि भएकाहरुले के गर्ने, के नगर्ने ?
प्रकाशित मिति: २०७७ मंसिर, २ प्रकाशित मिति: २०७७ मंसिर, २ by चेरवन्त खबर
Read Time:10 मिनेट, 47 सेकेन्ड
वि.सं.२०७७ साल मंसिर ०२ गते । मंगलबार । ईश्वी सन् २०२० नोभेम्बर १७ तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । प्रमादी संवत्सर । दक्षिणायन । हेमन्त ऋतु । श्रीशाके १९४२ । कार्तिक शुक्लपक्ष । तिथि–द्वितीया,०१ घडी ४१ पला,बिहान ०७ बजेर ०८ मिनेट उप्रान्त तृतीया । नक्षत्र–ज्येष्ठा,२५ घडी ०५ पला,बेलुकी ०४ बजेर २९ मिनेट उप्रान्त मूल । योग–सुकर्मा । करण–कौलव,बिहान ०७ बजेर ०८ मिनेट उप्रान्त तैतिल,बेलुकी ०६ बजेर ११ मिनेट उप्रान्त गर । आनन्दादिमा–मुद्गर योग । चन्द्रराशि–बृश्चिक,बेलकी ४ बजेर २९ मिनेट उप्रान्त धनु ।
काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०६ बजेर २७ मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०५ बजेर ०८ मिनेट । दिनमान २६ घडी ४४ पला । अन्राष्ट्रिय बिद्यार्थी दिवस ।
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) समय तथा परिस्थितीको राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्र कुनै पनि कामको थालनी गर्नुहोला कामहरु बिग्रने अधिक सम्भावना रहेकोछ । आफन्त तथा आफूले मन पराएको मानिससँग दुरी बढ्ने योग रहेकोछ । व्यापार व्यावसायमा प्रशस्त समय लगानी गरेपनि आम्दानी थोरै हुँदा आर्थिक व्यावस्थापन गर्न गाह्रो हुनेछ । अध्ययनमा मन नजादा गुरुवर्ग तथा आफन्तको गाली खाईनेछ । भौतिक सम्पती तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला समय मध्ययम रहेकोछ ।
बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) पति पत्नीका साथ रमाईलो व्यावसायीक यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । सवारी साधन तथा भौतिक सम्पती जोड्ने योग रहेको छ । पढाइ लेखाइमा अरुभन्दा अगाडी तपार्ईँको नाम आउदा मन प्रशन्न रहनेछ । माया प्रेमको गाठो मजबुत भएर जानेछ भने दाम्पत्य जीवनमा थप खुसीयाली छाउँनेछ । आफन्तका साथ मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । आम्दानी बढ्ने हुनाले विलासी जीवन यापन गर्न सकिनेछ । साझपख समय मध्ययम रहेकोले आफन्तसँग मनमुटाव सिर्जना हुनेछ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) न्यालयबाट हुने व्यायिक निर्णयहरु तपार्ईँकै पक्षमा फैसला हुनाले खुसीले उचाई नाघ्नेछ । पढाइ लेखाइमा नसोचेको सफलता हात लाग्नेछ । व्यापारमा बृद्धि हुनेछ भने थप ठाउमा लगानी गर्न सकिनेछ । आफन्त तथा मावली पक्षबाट भनेजस्तो सहयोग पाइने हुँदा आट तथा पराक्रम बढेर जानेछ । पुराना समस्याहरु सल्टाउन सकिने तथा नयाँ कामको थालनी गर्न सकिनेछ । प्रेममा सामिप्यता बढेर जाने तथा उपाहार प्राप्तीको गतिलो योग रहेकोछ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) अध्ययनमा मन नजाने हुनाले अरुभन्दा पछी परिने चिन्ताले सताउनेछ । आफन्त तथा घर परिवारका सदस्यहरुको पनि सहयोग तथा समर्थन नहुँदा एक्लोपनको महशुष हुनेछ । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला पेट सम्वन्धी समस्या आउन सक्छ । भौतिक साधन तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा बिचार पुर्याउनुहोला अप्रिय घट्ना नघट्ला भन्न सकिन्न । साभपख समय राम्रो रहेकोले आफन्त तथा मामा मावली पक्षबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) बिभिन्न अवसर आएपनि ति अवसरको सहि तरिकाले सदुपयोग गर्न नसक्दा समयले तपार्ईँलाई पछाडी छोड्नेछ । व्यापार व्यावसायमा आम्दानी कम हुनेछ भने खर्च बढ्नाले आर्थिक व्यावस्थापन गर्न कठिनाई हुनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा समय लगानी गर्नेहरुले जनताको आलोचनात्मक समर्थन पाउने योग रहेकोछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । आफन्तसँग टाडिएर लामो दुरिको यात्रा गर्नुपर्दा मन खिन्न हुनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) शाहशिलो कामगर्ने जोसजागर आउनेछ भने खेलकुद तथा यस्तै गतिविधिमा तपार्ईँको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ । पढाइ लेखाइमा परिणाममुखी उपलव्धी हासिल गर्न सकिनेछ भने छोटो दुरिको शैक्षिक यात्राको अधिक सम्भावना रहेकोछ । दाजुभाई तथा आफन्तसँग मिलेर गरिने जुनसुकै व्यावसाय फस्टाएर जाने हुनाले आर्थिक रुपमा सम्पन्न होईनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने पति पत्नी विच मायाको गाठो कसिलो भएर जानेछ । साझपख भौतिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) पढाइ लेखाइमा खासै ध्यान नजादा बिद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरुभन्दा पछी परिनेछ । कुटुम्बसँग मनमुटाव बढ्ने हुँदा आजको दिन टाढा नै रहनु राम्रो रहेको छ । बोल्दा वा निर्णय गर्दा ध्यान दिनुहोला आत्मघाती पनि हुनसक्छ । खानपानमा ध्यान नदिदा स्वास्थ्यमा समस्या आउनेछ । माया प्रेममा अविश्वास बढ्नेछ भने पति पत्नी विच विश्वासको वातावरण गुम्ने खतरा रहेको छ । साझपख छोटो दुरिका फलदायी यात्राको योग रहेकोछ ।
बृश्चिक(तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) पढाइ लेखाइमा प्रतिस्पर्धीहरुलार्ई किनारा लगाउदै नतिजा आफूतिर ल्याउन सकिनेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने हुनाले आर्थिक व्याबस्थापन सुदृड हुनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने घर परिवार तथा आफन्त बीचको सम्बन्धमा सुधार भएर जानेछ । सुन्दर तथा विलासी बस्तुहरुको प्रयोग मार्फत अरुको मन आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ । साझपख खानपानमा ध्यान दिनुहोला ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरी आम्दानीका स्रोतहरु बढाउन सकिनेछ । लामो दुरिको विदेश यात्राको गतिलो सम्भावना रहेकोछ भने विदेशसमा बसेर समय खर्चिनेहरुले प्रशस्त रुपैयापैसा कमाउँन सक्नेछन् । पढाइ लेखाइमा मनजाने हुनाले अन्य दिनभन्दा सुधार भएर जानेछ । मायाप्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि भने समय मध्ययम रहेकोछ । साझपख समय राम्रो रहेकोले सामाजिक काम गरि नाम कमाउन सकिनेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) आफन्तजन तथा दाजुभाईबाट प्रशस्त सहयोग पाईनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बडेर जानेछ । व्यापार व्यावसायबाट मनग्गे आम्दानी हुनेछ । तरलपदार्थ जस्तै हाईड्रो,पानि जस्ता उद्योग व्यावसायमा लगानी गर्दा उचित प्रतिफल पाइनेछ । सवारि साधन प्राप्तिको गतिलो सम्भावना रहेकोछ । परिवार तथा सन्तानको प्रगतिमा मन प्रशन्न हुनेछ । बिद्यामा तपार्ईँले गरेको मिहिनेत खेर जानेछैन । साझपख यात्रा गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) गीत संगित क्षेत्रमा रुची बढ्ने हुदा केही समय रमाईलो तिर पनि समय खर्च हुनेछ । समयको गती सँगै अगाडि बढ्न सकिने हुनाले आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन सकिनेछ । आज गरीएको लगानी फस्टाएर जाने हुनाले व्यापारबाट मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । नयाँ काम खोज्दै हुनुहुन्छ भने समयले रोजगार दिलाउने तथा कामका बढुवा हुने योग रहेकोछ । पढाइ लेखाइमा तपार्ईँको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ । माता पिताको सहयोगले राम्रा कामगरी समाजमा नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) समुदायको हक हितको निम्ती कामगर्ने अवसर आएपनि असजिला परिस्थिती हरुको सामना गर्नुपर्नेछ । पढाइ लेखाइमा ध्यान नजादा सफलता हात पार्न मुस्किल रहेकोछ । व्यापार व्यावसायमा लगानी गरेपनि भनेजस्तो आम्दानी नहुँदा मन दुखी हुनेछ । माया प्रेममा अविश्वास बढ्नेछ भने जीवन साथीसँग सामान्य मनमुटाव सिर्जना हुनेछ । साझपख समय राम्रो रहेकोले व्यापारमा बृद्धि हुनेछ । राजनीति तथा सामाजिक काममा समय खर्चनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ ।
ईलाका प्रहरी कोल्हबीले गरे १२ जुवाडेलाई पक्राउ
२०७६ चैत्र १२ गते बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस तपाईको आज
प्रकाशित मिति: २०७६ चैत्र, १२ प्रकाशित मिति: २०७६ चैत्र, १२
२०७७ बैशाख २१ गते आइतबार हेर्नू होस आजको राशिफल
२०७७ बैशाख १० गते बुधबारका दिन तपाईंको राशिफल
प्रकाशित मिति: २०७७ मंसिर, ९ प्रकाशित मिति: २०७७ मंसिर, ९
प्रकाशित मिति: २०७७ मंसिर, ८ प्रकाशित मिति: २०७७ मंसिर, ८
प्रकाशित मिति: २०७७ मंसिर, ७ प्रकाशित मिति: २०७७ मंसिर, ७
अन्तरास्ट्रिय समाचार (2) अपराध (17) अर्थ-वाणिज्य (2) आगलागी (5) आजको मौसम (3) आयात निर्यात (3) कालोबजारी (2) कृषि (7) केपी शर्मा ओली (7) कोरोना (102) क्‍वारेन्टाइन (3) खेति (1) खेलकुद (7) चट्याङ (1) चाड पर्व (3) जीवनशैली (2) झडप (4) दुर्घटना (3) धर्म (1) नेपाल प्रहरी (6) नेपाली सेना (1) पक्राउ (4) परीक्षा (1) प्रवास (6) बलात्कार (4) बिकास निर्माण (4) मेयर पक्राउ (1) राजनीतिक (1) राशिफल (94) राहत (11) रोजगार (1) लकडाउन (5) लागू औषध (1) शिक्षा (6) शुभकामना (1) श्रद्धाञ्जली (2) समाचार (6) सहयोग (1) सिमा (1) सीमा क्षेत्र (2) सुचना (4) सूचना (1) स्वास्थ्य (8) हत्या (3) हावाहुरी (3)
प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीबाट एफपियु युनामिड (डार्फर, सुडान) मिसन जाने प्रहरी टोलीलाई बिदाइ
कोरोना सङ्क्रमित पत्रकारको निःशुल्क उपचार
हरिहरपुरमा राहत कार्यक्रम बिथोल्ने तोडफोड गरे पनि १ सय ६६ जनालाई बितरण
रकम विवादमा छोराले कुटपिट गर्दा बाबुको मृत्यु
प्रकाशित मिति: २०७७ बैशाख, ८ प्रकाशित मिति: २०७७ बैशाख, ८
प्रकाशित मिति: २०७७ कार्तिक, १३ प्रकाशित मिति: २०७७ कार्तिक, १३